Global Aawaj | पाँचौ पटक सत्तारोहण गरेका देउवाको यस्तो छ राजनीति यात्रा पाँचौ पटक सत्तारोहण गरेका देउवाको यस्तो छ राजनीति यात्रा
पाँचौ पटक सत्तारोहण गरेका देउवाको यस्तो छ राजनीति यात्रा
शेरबहादुर देउवा वि.सं. २००३ जेठ ३१ गते डडेल्धुराको साबिक असीग्राम गाविस–५ र हालको गन्यापधुरा गाउँपालिका–१ मा जन्मिएका हुन्।
उनले प्राथमिक शिक्षा गाउँकै असिग्राम प्राथमिक विद्यालय र एलएसली सीताराम मावि डोटीबाट पूरा गरेका हुन्। देउवा २०२० सालदेखि नै कांग्रेस राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए। उनी बिपी कोइरालाको प्रेरणाबाट राजनीतिमा लागेका हुन्।
देउवाले स्कुले जीवनदेखि नै नेपाली कांग्रेसको राजनीतिलाई आफ्नो आदर्श बनाएका थिए।​एसएलसीपछि देउवा उच्च शिक्षा लिन भारत नगई ०२१ मा काठमाडौंको त्रिचन्द्र कलेजमा भर्ना भएका थिए।
यसपछि उनी नेविसंघभित्र राजनीतिमा सक्रिय भए। यसक्रममा उनी विभिन्न समयमा पटक-पटक पक्राउ परे। विद्यार्थी जीवनमा देउवा निडर र निर्भीक स्वभावका थिए।
नेविसंघमा सक्रिय भएर काम गरिरहेका देउवा वि.सं. २०२८ सालमा पहिलोपटक नेपाल विद्यार्थी संघको सभापतिमा विजयी भए। नेविसंघको नेतृत्वमा आएपछि उनले आफ्नो राजनीतिलाई झन् सशक्त रूपमा अगाडि बढाए। राजनीतिका सिलसिलामा देउवाले पटक–पटक गरी करिब ९ वर्ष जेलजीवन बिताएका छन्।
विद्यार्थी राजनीतिबाट आफूलाई अब्बल बनाएका देउवालाई बीपीले सुदूरपश्चिममा पार्टीको जिम्मेवारी दिएर खटाए। त्यतिबेला उनी भारतको बाटोबाट दार्चुला र बैतडी हुँदै डडेल्धुरा पुगेका थिए।
जब ०४६ मा नेपाली कांग्रेसले देशमा पहिलो जनआन्दोलन अगुवाइ गर्‍यो, त्यतिबेला देउवा लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्समा अध्ययन गरिरहेका थिए। जनआन्दोलन सफल भएपछि देउवा लण्डनबाट काठमाडौं आए।
०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा देउवा गृहमन्त्री बने। गृहमन्त्री बनेको पाँच वर्षभित्रै उनी मुलुकको प्रधानमन्त्री बने।
राजनीतिको धेरै उतारचढाव खेपेका देउवाले कांग्रेसभित्रको बढ्दो सत्ता संघर्षमा उनले कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुनजी) र गणेशमान सिंहको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साथ पाएका थिए।
देउवा २७ भदौ २०५२ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। कोइरालाले अघि बढाएका देउवाले पार्टीको १०औँ पोखरा महाधिवेशनमा कोइरालालाई नै नेतृत्वका लागि चुनौती दिए। ०५७ मा पोखरा महाधिवेशनमा देउवा कोइरालाकै विरुद्धमा सभापति पदमा उम्मेदवारी दिएका थिए, तर उनी पराजित भए।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व (जनयुद्ध) उत्कर्षमा पुगेका बेला संकटकाल लम्ब्याउने विषयमा निर्णय गरेको भन्दै कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ०५९ जेठ १९ मा प्रधानमन्त्री भएकै बेला देउवालाई साधारण सदस्यताबाट समेत निकालिदिए।
यसपछि फेरि कांग्रेसको नेतृत्व देउवाकै पक्षमा आयो र उनी पुनः कांग्रेस संसदीय दलको नेताका उम्मेदवार बन्‍ने मौका पाए। उनी सुशील कोइरालालाई हराएर नेता बनेका थिए। संसद्‌मा पार्टीको बहुमत भएकाले उनी दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने।
दलहरूले निरन्तर आन्दोलन गरेपछि ०६१ साल जेठ २९ मा राजाले पुनः देउवालाई तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनाए। तर, तेस्रो पटकको प्रधानमन्त्री काल ८ महिनाभन्दा अघि बढ्न सकेन।
राजनीतिक घटना सँगसँगै वि.सं. ०६१ माघ १९ गते ज्ञानेन्द्रले ‘शाही कू’ मार्फत देउवालाई दोस्रोपटक हटाइदिएर सत्ता आफ्नो हातमा लिए। त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला माओवादीलाई साथ लिएर ज्ञानेन्द्रविरुद्ध जनआन्दोलनको तयारीमा थिए।
संसद् पुन: स्थापनापछि गिरिजाप्रसाद पुनः एकपटक नेपाली राजनीतिमा चर्चाको शिखरमा आए। त्यसपछि देउवा कोइरालासँग पार्टी एकीकरण गरेर मूल पार्टीमै फर्किए।
०७२ सालको तेह्रौं महाधिवेशनमा पार्टी उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई हराएर देउवा नेपाली कांग्रेसको पार्टी सभापतिमा विजय भए।
२३ जेठ ०७४ मा देउवा चौथो पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए। देउवा ०७४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा डडेलधुराबाट निर्वाचित भएका थिए। शेरबहादुर देउवा आज पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्रीका रुपमा सपथ लिएका छन् ।